कपिलवस्तुमा १५ दिन यता कोरोना परिक्षण नै छैन्, संक्रमित भेटिएनन् भन्दै सरोकारवाला मख्ख ! « Mayadevi Online News Portal
कपिलवस्तुमा १५ दिन यता कोरोना परिक्षण नै छैन्, संक्रमित भेटिएनन् भन्दै सरोकारवाला मख्ख !
प्रकाशित मिति : २७ आश्विन २०७७ मंगलवार १९:३७
कोरोना भाइरसको परिक्षण कपिलवस्तुमा सुस्ताएको पाइएको छ । देशव्यापी परिक्षणको दायरामा बृद्धि भएर संक्रमितको संख्या धमाधम बढीरहेको बेला जिल्लामा परिक्षणदर सुस्ताएको हो ।
परिक्षण सुस्ताएकै कारण पछिल्लो समय जिल्लामा कोरोना संक्रमित भेटिने गरेका छैनन् । १० स्थानीय तह रहेको कपिलवस्तुमा १५ दिन यता कोरोना परिक्षण हुँदै नभएको स्रोतको दाबी छ ।
कोरोना संक्रमणको डर भएकाहरु लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटवल पुगेर कोरोना जाँच गराउने गरेका छन् । सार्वजनिक गाडी चढेर कोरोना जाँच गर्न बुटवल पुगेका कतिपयलाई कोरोना पुष्टि भएको छ । यसले झन कोरोनाको जोखिम बढाएको छ ।
यता बुटवल पुगेर कोरोना परिक्षण गराएका व्यक्तिमा कोरोना देखिएपनि उनीहरुको कन्ट्याक्ट टे«सिङ भएको छैन् । जिल्लामा कोरोना परिक्षण सुस्ताएपछि सर्वसाधारण बुटवल जान बाध्य भएका छन् । सरकारले कोरोना परिक्षणको शुल्क घटाएपनि संक्रमित भएका व्यक्तिनै सार्वजनिक गाडीमा आउँजाउँ गर्दा जोखिम झनै बढ्ने अनुमान छ ।
कोरोना परिक्षण गर्दा खर्च बढी लाग्ने भएका कारण जिल्लाका स्थानीय तह डराएको स्रोतको दाबी छ ।
यता जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहले फ्याट्ट फुट्ट कोरोना परिक्षण गराएको पाइएको छ । गत असोज १८ गते वाणगंगा नगरपालिकाले १७ जनाको पीसीआर परिक्षण गराएको थियो । स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ठगराज पौडेलले कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका र लक्षण देखिएकाको पीसीआर परिक्षण गराएको बताउनुभयो ।
यता अरु स्थानीय तहले कोरोनासंग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिए कोरोना परिक्षण गराउने गरेका छन् । कोरोना परिक्षण गराएपनि रिर्पोट भने रुपन्देहीका बुटवल र भैरहवामा रहेका अस्पतालबाट आउने गरेको छ ।